Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBO) Seenaa Qabsoo Bilisummaa Kosovo (QBK) irraa Maal Barachuu danda’aa?
(By Sochii Walabummaa Oromiyaa)
“The United States has today formally recognized Kosovo as a sovereign and independent state. We congratulate the people of Kosovo on this historic occasion … In light of the conflicts of the 1990s, independence is the only viable option to promote stability in the region.” (U.S. Secretary of State Condoleezza Rice, Washington DC, Feb. 18, 2008)
Seenaa fi haalli qabsoon isaanii keessatti geggeeffamu addaddummaa ha qabaatumalee, QBOkan QBKirraa baratuudanda’u:
(a) Ummatin waan fedhubeekee, Ijajabaatee, irreehoratee, kutannoon mirga isaa falamate gargaarsa addunyaaakkahoratu;
(b)Kaayyoo bilisummaa bakkaangahuuf “qabsoon agaa” qofaan akka hingeenya fi qabsoon hidhannoo akka filmaata biraa hin qabnne;
(c) Yeroo gabaabaa keessatti waraana ijaarachuu fi injifachuun akka danda’amu.
Daangaan Kosovo, akkahar’abeekkamuttikansararame, dhuma Lola Addunyaa 2ffaa booda, yerooSoshaalist Republic of Yugoslavia keessattimirgaofiin of-bulchuugonfatteture. Bara 1989 keessa, mootummaan Serbia, heerahaaraatumuun, mirgaKosovonofiin of-bulchuufqabdduirraamulqe. UmmatinKosovos, bara 1991 keessa, ‘referendum’ godhachuun, fedhii Serbian alatti,walabummaa Kosovo labse.
Biyya walaba labsachuu isaanii sababfachuun, Serbian, 1990moota keessa, cunqursa fi roorroo hedduuummata Kosovo iraangeesse. Ummata Kosovo kumaatamaan lakkaawwaman ajjeessitte; 800,000kanta’anlafa fi mana isaan iiirraa buqqisite. Ummatin Kosovo garuucunqursa fi rorroo isa irra gahaa tureen mo’amuun mootummaa Serbiatii haarka kennuu gonkumaa nidide; kutannoo fi jabina caalaan fincila isaa finiinse.
Waraana Bilisummaa Kosovo (WBK) ijaaruun kan jalqabame bara 1993 keessature. Waraanichi kan tarkaanfiiisa duraafidhate bare 1996 keessature. Yeroosanitti, lakkoobisi miseensota isa nama 150 qofaa ha turumalee Pristina, Vucitrn, Kosovska Mitrovica, Pec, Suva Reka, fi Piodujevo keessatti tarkaanfii laalessaa addaddaa diina isaa irratti fudhachaa ture. Tarkaanfiin WBK kan irratti xiyyeeffates buufata polisii warra Serbia, buufata raayyaa waraana mootummaa fi gantoota fi basaasttota dhalootaan Kosovar ta’an irratti ture. Tarkaanfiin WBK diina irratti fudhatu, akka ‘civilians’ hin gaagaane of-eegganno guddaan sosso’u turan.
Bara 1997 keessa, WBKn, akka hoogganoo tinsiyaasa Kosovo haasaa nagaa mootummaa Serbia wajjin godhan keessatti murtii mirga ummatin Kosovo mootummaa wal aba ijaarrachuuf qabu dabrasee kennu irraa akka qooda hinfudhanne akeekkachiise. Akeekkachiis ini saan ifatti fira fi diinatti labsan kun tarkaanfii qabatamaa isaan yeroo yerootti fudhachaa turanitti dabalamee kutanno isaan waraana riphee lolaa geggeessuuf qaban xaliila godhee mul’ise. WBKn siyaasa (geo-politics) addunyaaf ilaaacha gahaa kankennu fi, osoo kaayyoo isaa hin ganin, toofttaa isaa akka feesisetti kan jijjiiruuf banaa fi dandeettii qabu ture.
WBK, dhuma 1997 jala, ijaaramee bara afur (4) keessatti, nannoo Donji Prekaz fi Drenica qabachuun akka diinni acchi gahuu hin dandeenye ittisuu danda’e. Naanno kanattis misensota WBK fi kaadhimaatootaa addaddaa leenjisuu jalqabe. Jalqaba bara 1998 tti, lakkoobsi WBK gara 500 gahe: waggaa lamatuu keessatti, kan bara 1996 keessa 150 ture,harka 3 olguddate.
Addunyaanis ummatin Kosovo mirga isaa kabachiifachuuf hamma du’aatti lolachuuf akka kutate akka gaariitti hubate. Akkuma Oromoon “yoo abbaan iyyate [lolate], ollaan namaaf dirmmata” jedhu, ummatin Kosovo kutachuu arginaan hawaasin addunyaa (international community) araaraa buusuuf gidduu seene. Serbian nagaa diduu irraan kan ka’e NATO (North Atlantic Treaty Organization) Serbia irratti bombii hedduu roobsuun akka isheen Kosovo irraa harka ishee fudhattu dirqisiise. Serbianis human ishee kan waraanaa fi kan poolisii Kosovo keessaa baaftte. Gumiin Ittisaa kan Mootummoota Gamtoomanii (UN Security Council) Kutanoo (resolution) bara 1999 baseen, hamma haalli Kosovo murtii maayyii argatutti, Kosovon mootummaa cehumsaa (UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)) jedhamujalagalchee Kosovo fi Serbia marissisuu jalqabe. Isaanis walii-galtee irra gahuu hin dandeenye. Yeroo kanatti, Dhaabine Mootummoota Gamtoomee (UN) walabummaa Kosovo deggeree gabaasa galche.
Fulbana 17, 2008, Caffeen Parlaamaa Kosovo walabummaa Kosovo labse. Ergasii as biyyoonni 100 olta’an Kosovo akka biyya walabaatti fidhataniij iru, mootummaa USA dabalatee.
Dhaabonni addunyaa (international organizations) heddunis Kosovof miseensummaa kennan. Bara 2008 keessa, Serbian, dhimma kana irrattii laalcha Mana Murtii Addunyaa (International Court of Justice (ICJ)) gaafatte. Mannimurtii Addunyaas, “Kosovoon walabummaa ishii labsuun seera addunyaa tokkollee hincabsine” jechuun deebii kenneef.
Ummatin Kosovo fi jaarmonni siyaasa Kosovo waan barbaadan beeku turan: Kosovo Walaba! Ummatin Kosovo mirga isaa falmachuuf “qabsoo nagaa” qofaan akka hin geenya hubate. Yeroo gabaabaa keessatti WBK ijaarrate. WBK harka maratee biyya ambaa keessa hin teenye. Biyya isaa keessatti tarkaanfiilee laalessaa diina isaa irratti fudhachuu eegale. Tarkaanfi iisaa kanaan kutannoo mirga isaaf falmachuuf qabu addunyaatti mul’ise. Addunyaas ni dirmateef. Ummata fi biyya isaanii bilisummaa fi walabummaa gonfachiisan.
*Sochii Walabummaa can be reached at sochiiwalabummaa@gmail.com and at Facebook page Sochii Walabummaa Oromiyaa.